चलचित्र ‘वीरविक्रम–२’ बाट आकाश आउट, पल इन, आखिर किन ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
काठमाडौँ, २६ कात्तिक, चाम्स इन्टरटेन्मेन्टले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र वीरविक्रम–२ बाट नायक आकाश श्रेष्ठ बाहिरिएका छन् । यसअघि नै उनलाई चलचित्रको मुख्य नायकको रुपमा अनुबन्धित गरिएको थियो । आकाशको ठाउँमा अर्का नायक पल शाहले मौका पाएका छन् । आकाशले चलचित्रमा काम गर्न नसक्ने भएपछि नै पल शाहले यो चलचित्रमा काम गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
चाम्स इन्टरटेन्मेन्टका सञ्चालक मिलन चाम्सले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आकाश श्रेष्ठले वीरविक्रम–२ मा काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको र पल शाहलाई अनुबन्धित गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
आखिर किन बाहिरिए आकाश र भित्रिए पल ?
आकाश श्रेष्ठ बाहिरिनुको कारण भने निक्कै दुखद रहेको छ । विज्ञप्तिमा चाम्सले भनेका छन्, ”बिर बिक्रम २ मा अनुबन्धीत नायक आकाश श्रेष्ठका पुजनिय हजुर बुवा श्री बाल प्रसाद श्रेष्ठको स्वास्थ स्थिती अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेको र थप उपचारको लागी दिल्ली लानु पर्ने भएकाले नायक आकाश श्रेष्ठले चलचित्र बिर बिक्रम २ लाई समय दिन नसक्नु भएको कुरा अत्त्यन्त दूःखका साथ जानकारी गराउन चाहान्छौँ ।”
नायक आकाशले समय दिन नसक्ने भएपछि अन्तिम समयमा आएर चलचित्रको नायकमा पल शाहलाई अनुबन्धित गर्नु परेको चाम्सले बताएका छन् । उनले भने, ‘नायक आकाश श्रेष्ठको ठाँउमा नायक पल शाहा अनुबन्धित भएका छन् ।’ उनले नायक आकाश श्रेष्ठको पुजनिय हजुर बुवा बाल प्रसाद श्रेष्ठको यथा शिघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दै चाँडै नायक आकाश श्रेष्ठ संग अर्को सिनेमामा काम गर्न पाईयोस भन्ने कामना पनि गरेका छन् ।
चलचित्र वीरविक्रमको आउँदो २०७५ साल मंसिर ३ गते सोमबारदेखि छायांकन सुरु हुने पनि चाम्सले जानकारी दिएका छन् । यसअघिको पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार अर्थात् कात्तिक २६ गतेबाट सुटिङमा जाने बताइएको थियो । अन्तिम समयमा आएर चलचित्रको मुख्य नायक नै परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकोले सुटिङमा जान केही दिन ढिला भएको हो ।
प्रकाशित मिति: 2018-11-12 2018-11-12 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged आकाश श्रेष्ठ कलाकार चलचित्र पल शाह
हस्तकला व्यापार मेला २८ कात्तिकदेखि हुने, दुई सयभन्दा बढी स्टल रहने
Tags: आकाश श्रेष्ठ, कलाकार, चलचित्र, पल शाह